Image caption Kalusha Bawalya
Tabobaraha kooxda Manchester United, Jose Mourinho, ayaa aad u amaanay ciyaaryahanka Paul Pogba ee u safta kooxdiisa waxaanu sheegay inuu "kooxda guul u horseeday". Pogba oo kooxda kabtan u ahaa ciyaarytii furitaanka tartanka horyaalka Ingiriiska ee ay gorrodda isku dareen kooxda Leicester City oo guushu ku raacday Man U laba goor iyo hal. Goolka ugu horreeyeyna waxa u dhaliyay Pogba.
Weeraryahankii Chelsea, Michy Batshuayi, ayaa ka tagay Stamford Bridge oo amaah ugu wareegay kooxda Valencia, halka Kurt Zoum ayaa isna u wareegay Everton oo uu isna amaah kula joogi doono ilaa dhamaadka xili ciyaareedkan bilaabmay.
Xidhiidhka kubadda cagta aduunka ee FIFA ayaa ganaax laba sanadood ah oo laga mamnuucay inuu qabto hawlo isboorti xiddigii kubadda cagta reer Afrika ee u dhashay dalka Zambia, Kalusha Bawalya.
Go'aankaa FIFA waxaa lagu saleeyey natiijada baadhitaan lagu hayey xidhiidhkii ka dhexeeyey isaga iyo masuul reer Qatar ah oo isna la ganaaxay, kaas oo muujiyey in Bawalya hadyado ka gudoomay masuulkaa reer Qatar, taas oo ah mid tuhun gelinaysa hufnaantiisa shaqo.
Hase yeeshee war qoraal ah oo uu soo saaray ayaa Kalusha Bawalya ku yidhi "wax dambi ah ma aan gelin" waxaanu wacad ku maray in uu "dadaal adag" u geli doono si uu u muujiyo in aanu wax dambi ah lahayn. Qoraalkaa uu Bawalya soo saaray waa kale oo uu ku sheegay oo yidhi "haba yaraatee maan falin fal wax u dhimaya sumcadda ciyaarta kubadda cagta".